Misy adihevitra tsara momba Cranky Geeks nivadika ho TWIT tamin'ity herinandro ity izay akaiky sy malalako amin'ny fanajana ireo mpanao gazety. Ireo bilaogera dia tsy mpanao gazety amin'ny hevitry ny teny nentim-paharazana fa isika dia mpanao gazety rehefa jerena amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa.
Ireo lahatsoratra taloha dia mbola 'velona' amin'ny valin'ny motera fikarohana ary misy ny fanehoan-kevitra mifandraika (matetika) amin'ny vaovao noresahina. Mihevitra i Dvorak fa adala ny miverina manao fanovana amin'ireo lahatsoratra taloha… mino izy fa raraka ny ronono ary satria tsy misy mamaky azy io matetika dia vita ary vita ary tokony handroso ny mpampiasa. Niresaka i Leo fa noterena hanitsy ny lahatsoratra izy, indrindra raha misy fanehoan-kevitra miseho diso tafaraka amin'ny fanovana taorian'ny nanaovana azy. Miombon-kevitra amin'i Leo aho!
Hadisoana nasongadin'ny fanehoan-kevitra - rehefa mahita lesoka ao amin'ilay lahatsoratra ny mpamaky ny bilaogiko, dia matetika no ahitsiko ny lesoka ary hamaly amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra fa efa nahitsiny sy ny fankasitrahako ny vaovao nomen'izy ireo. Manome firaketana an-tsoratra ny fanovana izany ary koa mampiseho ireo mpamaky fa tsy olombelona ihany aho, fa miahiahy momba ny maha marina ny fampahalalana ahy.
Fitsipi-pitenenana sy tsipelina - Rehefa tena hitako fa nanao hadisoana ara-pitsipi-pitenenana aho (mazàna olon-kafa tsy maintsy milaza amiko) dia hataoko ny fanovana ary tsy hambara aho. Satria tsy manova ny maha-marina ny lahatsoratra am-bilaogy izany, dia tsy mahatsapa ny ilana hilazako fa mahatsiravina aho amin'ny fitsipi-pitenenana sy ny tsipelina. Rehefa dinihina tokoa, ireo mpamaky ahy mahazatra dia efa mahatsapa an'io!
Amboariko ny lesoka rehetra hitako na nasehon'ny mpamaky ahy. Tokony ianao koa! Tsy toy ny mpanao gazety an-tsoratra, manana fahaiza-manao mandroso amin'ny fanovana an-tserasera izay tsy mitaky antsika 'hamoaka indray' lahatsoratra iray izahay.
Momba ny fahamendrehana sy ny fahefana ary ny fahamendrehana no anaovako fahazarana manitsy ny hadisoan'ny bilaogiko. Tsy manan-kery ny bilaogy iray raha tsy mino ny mpamaky ny fampahalalana misy ary manondro izany. Mino aho fa raha tsy jerenao ny fanitsiana ny lesoka nataonao dia hilamina ny fahatokisanao azy - toy ny isan'ny mpamaky anananao sy ny isan'ny tranonkala miresaka anao.